Fanambarana ara-paminaniana mahery vaika amin'ny dingana faharoa amin'ny taona | TOKO VAVAKA
Andinin-tsoratra ao amin'ny Baiboly
Drafitra famakiana Baiboly
Asabotsy, Septambra 25, 2021
Hiditra / Join
Home Teboka am-bavaka Fanambarana ara-paminaniana mahery vaika ho an'ny dingana faharoa amin'ny taona
Fanambarana ara-paminaniana mahery vaika ho an'ny dingana faharoa amin'ny taona
Jona 7, 2021
Androany isika dia hiatrika fanambarana ara-paminaniana mahery vaika amin'ny dingana faharoa amin'ny taona. Vao niditra tamin'ny dingana faharoa tamin'ny taona isika. Betsaka ny fitahiana mifamatotra amin'ny dingana tsirairay amin'ny taona, toy izany koa ny fanozonana sy fahoriana. Vao nanomboka ny dingana vaovao ary zavatra maro sahady no efa niseho teto amin'ny firenena. Avela ho antsika ny manapa-kevitra amin'ny fomba itiavantsika ny dingana faharoa amin'ny taona ho antsika.
Andriamanitra dia nanome antsika ny fahefana hanapa-kevitra samirery ny amin'ny hoavin'ny isan'andro. Tsy mahagaga raha milaza ao amin'ny bokin'ny Joba 22:28 ny soratra masina, fa hanambara zavatra ianao, dia hotanterahina ho anao izany; Ka hamirapiratra amin'ny lalanao ny mazava. Andriamanitra dia nanome antsika ny fahefana hanambara zavatra iray ary hanao izany. Na milamina na tsia izao tontolo izao, na miroborobo ny toekarena na tsia, dia manana fahefana hanan-karena isika ary hamerina amin'ny laoniny ny ara-dalàna eto amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny teny aloaky ny vavantsika.
Nanome voninahitra ny tenin'i Josoa Andriamanitra tamin'izy niady tamin'ny mpanjaka dimy. Ary nasain'i Josoa nijanona ny masoandro tao Gibona, ary ny volana nijanona teo Aijalon. Mijanona eo ny masoandro sy ny volana mandra-pamalian'ny zanak'Isreal ny fahavalony. Ny Baiboly dia nanoratra fa Andriamanitra dia mbola tsy nihaino na nihaino feon'olona toa azy tamin'i Josoa.
Ary koa, amin'ity dingana faharoa amin'ny taona ity, hanao fanambarana ara-paminaniana mahery vaika isika.
Ny teny faminaniana dia fanononana ny zavatra ho avy. Manonona azy ireo amin'ny alàlan'ny vavantsika amin'ny finoana isika fa Andriamanitra mahay sy mahavita be azy ireo. Ho antsika maro izay nanana fiandoham-piainana tamin'ny taona 2021, ity dia fotoana iray hafa hamenoana ny fizotrany rehetra ary hamita ny taona mahery. Mandidy aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, izay zavatra rehetra nenjehinao hatramin'ny fiandohan'ny taona ka azonao, dia alefa aminao moramora amin'ny anaran'i Jesosy izy ireo. Raha mieritreritra ianao fa mila fanambaràna mahery vaika amin'ny dingana faharoa amin'ity taona ity, dia andao hiara-hivavaka.
Ray Tompo ô, misaotra anao aho noho ny nanomezanao ahy ny fahasoavana hijoro ho vavolombelona volana iray hafa amin'ny taona 2021. Misaotra anao aho tamin'ny fitsimbinana ny aiko mba hijerena ny dingana faharoa amin'ny taona, avelao hisandratra amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao. Misaotra anao aho noho ny fahasoavana izay nanisa ahy ho olombelona amin'izao fotoana izao, misaotra anao aho noho ny tombontsoa miaina, Tompoko, avelao hisandratra amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao.
Ray Tompo ô, manapaka amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho, ny fahefana rehetra nanakana ahy tamin'ny antsasaky ny taona, manapa-kevitra aho fa tsy manan-kery amiko amin'ny anaran'i Jesosy izy ireo. Ny fahefan'ny razana rehetra izay nahatonga ahy tsy afaka tamin'ny antsasaky ny taona dia naringana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao.
Ray Tompo ô, manapa-kevitra aho fa izay zavatra rehetra nenjehiko hatramin'ny tapaky ny taona ka tsy mbola tratrako dia mivavaka aho mba hamotsoranao ahy amiko moramora amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka aho ny fahasoavan'Andriamanitra Tsitoha no hamoha ny varavarana mihidy rehetra, ny varavarana rehetra izay nakatona tamiko, manome didim-pitsarana aho fa ny herin'Andriamanitra Tsitoha no hanokatra azy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompo ô, ny soratra masina dia milaza fa tsy ho faty aho fa ho velona hanambara ny tenin'ny Tompo ao amin'ny tanin'ny velona. Ray Tompo ô, ny didiko amin'ny fahefan'ny lanitra dia tsy hahafantatra ny fonenako amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Nofoanako ny fandaharam-pahafatesana rehetra amin'ny fiainako sy ny an'ny mpianakaviko, manimba ny herin'ny fahafatesana amintsika amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Jesosy Tompo ô, satria Andriamanitra no manome antsika fahaizana mampanan-karena. Mamoaka didy amin'ny anarana Jesosy, mahazo fahefana hanan-karena amin'ny anaran'i Jesosy aho. Mandidy aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, ny fahasoavana hanangona harena dia navotsotra ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, manavotra ny andro sisa tavela amin'ity taona ity amin'ny ran'i Kristy sarobidy aho. Hofoanako amin'ny alàlan'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy ny fandaharana demonia rehetra amin'ny fiainako.
Ray Tompo ô, mivavaka aho mba hamotsorana ireo fitahiana rehetra mifandraika amin'ity dingana vaovao ity. Tompoko, manapa-kevitra aho fa ny anjelin'ny Tompo dia hanomboka hamaha ny fitahiana rehetra izay ilaina amin'ity dingana faharoa ity amin'ny anaran'i Jesosy.
Manome didy amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho fa ny fiarovan'Andriamanitra Tsitoha dia ho eo amiko mandritra ny taona sisa. Navoakako ny tenako sy ny ankohonako tamin'ny zana-tsipika ratsy rehetra izay manidina manodidina, ampandehaniko ho ahy sy ny ankohonako ny elo, tsy hisy ratsy hanjo antsika amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba hitahy ahy amin'ny fahombiazana rehetra amin'ity taona ity. Mandidy aho fa hambinina izay rehetra apetrako. Mandà ny tsy hahomby aho, amin'ny lafiny rehetra tsy nahombiazako dia manapa-kevitra aho fa ny fahasoavan'Andriamanitra Tsitoha no hanandratra ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompo ô, manao didy amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho, ho an'ireo izay miandrandra anao ny ateraky ny kibo, dia mivavaka aho mba hamelanao azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka aho fa ny famindram-ponao no hamohanao ny vavonin'izy ireo ary hitahy azy ireo amin'ny zaza tsara amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
Ray Tompo ô, mandidy aho fa izay miandrandra anao hahita asa tsara, mivavaka aho mba hamalianao azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Na eo amin'ny toerana tsy dia ampy aza ny fahaizan'izy ireo dia manome didy aho fa ny fahasoavanao no hiteny amin'ny anaran'i Jesosy.
KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny masquerades amin'ny nofy
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny fanandramana mamono tena
Pasitera Ikechukwu Chinedum no anarako, lehilahin'Andriamanitra aho, izay fatra-pitia ny hetsik'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mino aho fa nomen'Andriamanitra hery sy fahasoavana hafahafa ny mpino tsirairay hanehoana ny herin'ny Fanahy Masina. Mino aho fa tsy tokony hisy Kristiana heniky ny devoly, manana fahefana hiaina sy handeha amin'ny fanapahana amin'ny alàlan'ny vavaka sy ny teny isika. Raha mila fanazavana fanampiny na torohevitra, azonao atao ny mifandray amiko ao amin'ny chinedumadmob@gmail.com na Miresaka amiko amin'ny WhatsApp And Telegram amin'ny +2347032533703. Izaho koa dia tiako ny manasa anao hanatevin-daharana ny vondrona vavaka 24 ora mahery ao amin'ny Telegram. Tsindrio ity rohy ity hanatevin-daharana Ankehitriny, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Hotahian'andriamanitra anie ianao.
Hevitra matanjaka hanoherana ny lova ratsy
Teboka vavaka hanoherana ny fanahin'ny fanamoriana
Teboka vavaka hanoherana ny firaisana demonia aminao
Mosesy Jiona 10, 2021 Ao amin'ny 9: 13 am
Ahoana no ahafahako mamaky an'io sakana io ao amin'ny vohitry ny reniko
mpiasa mpiasa Jiona 22, 2021 Ao amin'ny 6: 29 am
Mivavaha mafy mba ho ringana ny fanekena ratsy rehetra izay miady aminao. Kristy dia nametraka ny fanekena vaovao tamin'ny alàlan'ny ràny izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijalian'i Kalvary.
Miombom-pinoana aho ary manoratra amin'ny alàlan'ny Fahefan'ny lanitra, ny fanekempihavanana demonia na ny sakana rehetra ao an-tranon'ny reninao dia potehin'ny afon'ny Fanahy Masina.
Emmanuel 14 jona 2021 Amin'ny 12:32 hariva
Misaotra an'Andriamanitra isika noho ireo fanambarana ara-paminaniana ireo tamin'ny fiainantsika
Fitsipika ara-Baiboly 10 Tokony harahin'ny tompona orinasa kristianina rehetra
Septambra 25, 2021
Septambra 23, 2021
Antony 5 mahatonga ny mpino hiaina anaty tahotra
Septambra 21, 2021
Isaky ny Vavaka vavaka isan'andro
SUBSCRIBE AN-TOKONY NY FIVORIANA ALOHA
MPIARAKA AMINTSIKA ANDRIAMANITRA ARY TAHIANA
Toeram-bavaka 30 ho an'ny taom-baovao 2020
Novambra 15, 2018
30 Mivavaka amin'ny mamatonalina ho an'ny fahatapahana ara-bola
50 mivavaka amin'ny ady dia manohitra ny herin'ny maizina.
Oktobra 15, 2018
Andinin-tsoratra ao amin'ny Baiboly81
Drafitra famakiana Baiboly36
Fiainana araka an'Andriamanitra16
Dailyprayerguide.com dia tranokala natokana hivavahana. Mino izahay fa raha kristiana mahomby dia tsy maintsy atolotra amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Ireo teboka ao amin'ny tranokalanay dia ny fitarihana anao rehefa miasa amin'ny fanatsarana ny fiainanao hivavaka. Mikarakara ireo mpampiasa anay izahay ary maniry ny hahita ny tanan'Andriamanitra miantehitra amin'izy ireo amin'ny vavaka. Koa miarahaba anao ianao rehefa miaraka aminay anio ary miara-mivavaka aminay, ilay Andriamanitra mamaly vavaka dia hihaona aminao amin'ny fotoana ilana ny zavatra ilainao amin'ny anaran'i Jesosy. Tongasoa eto amin'ny sambo. Hotahian'andriamanitra anie ianao.
© Everydayprayerguide 2019 | Zo rehetra voatokana
Salamo 91 mivavaka ho an'ny fiarovana
Oktobra 30, 2019
PSALM 7 izay midika hoe andalana
Enga anie 1, 2020
Vavaky ny famonjena amin'ny mpitandrina
Janoary 15, 2019